﻿ ​के तपाई उपरखुट्टी लगाएर बस्नुहुन्छ ? सावधान !
​के तपाई उपरखुट्टी लगाएर बस्नुहुन्छ ? सावधान !
एउटा खुट्टामाथि अर्को खुट्टा चढाएर बस्नुलाई उपरखुट्टी भनिन्छ । खासगरी आफुभन्दा ठूलाबडा, गन्यमान्य व्यक्तिको सामुन्ने उपरखुट्टी लगाएर बस्नुलाई शोभनिय मानिदैन ।
उपरखुट्टी लगाएर बस्नु शोभनिय नमानिनुको कारण यो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेछ । उपरखुट्टी लगाएर बस्नुको हानिकारक प्रभाव शरीरमा पर्छ । हुन त हामी यसलाई स्टाइलको वा आरमको रुपमा लिन्छौं । कतिपय अवस्थामा आफुलाई ठूलो देखाउन पनि हामी उपरखुट्टी लगाउँछौं, तर यो पोजिसन सही होइन ।
भेरिकोज भेन्समा नसा बढेको हुन्छ । कुनैपनि नसा भेरिकोज भेन्स नै हुनसक्छ । तर सबैभन्दा प्रभावित नसा हाम्रो खुट्टा र खुट्टाको पञ्जामा हुन्छ । त्यही कारण उभिदा वा घुम्दा हाम्रो तल्लो भागको नसामा दबाब बढ्छ । भेरिकोज भेन्स सामान्यत छालाको सतहमा देखिने निलो नसा हो । कहिले काहीँ यसले गम्भिर समस्याको रुप लिन्छ ।
जब हाम्रो रक्तचाप जाँच गरिन्छ, त्यसबेला चिकित्सकले खुट्टालाई सामान्य पोजिसनमा राख्न भन्छ । उपरखुट्टी लगाएको अवस्थामा रक्तचाप जाँच गरिदैन जसकारण उपरखुट्टी लगाएर बस्दा रक्तचाप स्वत बढ्छ ।